Be careful…ultranationalist Bama, Rakhine Buddhists and the Political or Military Masters | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Reported the Racist Nay Myo Wai for inciting Racial Hatred
Rohingya face uncertainty, even in Muslim countries »
Even in Indonesia, your RAPIST Buddhist Fishermen were exposed by the Indonesian Police after they were (sadly) killed. (We don’t support or agree to that kind of killing.
shared Black Angle‘s photo.
Tags: 969, Bangladesh, BBC, Buddhism, Burma, Human Rights Watch, India, Muslim, Rakhine State, Wira Thu
This entry was posted on April 25, 2013 at 10:58 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
3 Responses to “Be careful…ultranationalist Bama, Rakhine Buddhists and the Political or Military Masters”
April 25, 2013 at 11:17 am | Reply
MM News Hub shared Myo Set’s photo.
Another compilation of my comments
ကျနော်ရေးတဲ့အထဲမှာ ဖြည့်စွက်ဖို့လိုသွားတာပေါ့လေ။ အမေရိကန်က ရေနံနဲ့ အရင်း၇ှင်စံနစ်လိုအပ်ချက်အရ အရှေ့အလယ်ပိုင်းးကိုနိုင်ငံရေးအတွက်နဲ့ဝင်တယ်။ မွတ်ဆလင်တွေက ဘာသာရေးနဲ့ ရန်ငြိုးထားတယ်။ ဒါငြင်းစရာ မလိုပါဘူး။ ဒါကို ဟန်တင်တန်တို့ပြောပြီးသားပဲ။ နောက်ပြီးဒီ Fault Lines တွေက ဗုဒ္ဒဘာသာအုပ်စုနဲ့ မွတ်ဆလင်အုပ်စုကြားမှာ ရှိနေပြီးသားဆိုတာလဲ မငြင်းဘူး။ ဒီအက်ကြောင်းကို မကြီးကြီးအောင်ဆွဲချဲ့တဲ့ နေရာမှာ နှစ်ပိုင်းမြင်တယ်။
(၁) ဘင်္ဂါလီလော်ဘီတွေနဲ့ ဝါဟာဘီဖော်လိုဝါ ခိုမေနီတပည့်တွေ မွတ်ဆလင်အသိုင်းအဝိုင်းမှာရှိတယ်။ ဒီလူတွေက ဒီလို မိတ္တီလာအရေးအခင်းလို ကိစ္စမှာ လက်သည်ထက် အမြတ်ထုတ်သူနေရာက ရှိနိုင်တယ်။ ဒါကို လက်ခံတယ်။ ဒါဟာ လော်ဘီအုပ်စုတွေနဲ့ 82 ဥပဒေတိုက်ဖျက်ရေးသမားတွေ လုပ်မယ့်ကိစ္စပဲ။ ဒါပေမယ့ ဒီလူတွေသာ လက်သည်ဆိုရင် လုံခြုံရေးမျက်စိ သိပ်စူးရှတဲ့ အစိုးရက ဘယ်လောက်အရှင်ထားမလဲ ဆိုတာ ကျနော်တို့ တစ်ချက်ကြည့်ဖို့လိုမယ်။ ဒီလော်ဘီအုပ်စုတွေရဲ့ အင်အားက ဗကပ တို့လိုမှမဟုတ်ဘဲ။
မြန်မာ့ထောက်လှမ်းရေးရဲ့ပြိုင်ဘက်မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီလို မိတ္တီလာကေ့စ်လိုဟာမျိုးသည်ငွေ၊ ပါဝါ နှစ်ခုလုံးတောင့်တဲ့ အင်အားကြီးတစ်ခုက စစ်ဆင်ရေးလို စံနစ်တကျ လုပ်သွားတာကို မြင်နေရတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရင် Paramilitary action ဆန်ဆန် လို့တောင်ဆိုလို့ရမယ်။ ဒီလို စံနစ်ကျမှုနဲ့ အင်အားမျိုးဟာ လော်ဘီတွေဖက်ရှိနေရင် အစိုးရကိုတောင်ခြိမ်းခြောက်နိုင်တယ်။ဒီလိုအင်အားမျိုးနဲ့ ထိုးဖောက်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေ ဝါဟာဘီလော်ဘီတွေဖက် မရှိတာ ဆင်ခြင်ကြည့်ရင် သိသာမှာပါ။ ဒါကြောင့် ခိုမေနီသမားတွေက အမြတ်ထုတ်ဖို့နဲ့ မီဒိယာကနေ အိုအိုင်စီဝင်ဖို့ကိုပဲ လော်ဘီလုပ်ရုံ အာဏာကုန်လို့မြင်ပါတယ်။
(၂) ဒုတိယ အပိုင်းက ဒီလို ပဋိပက္ခကို အကောင်အထည်ဖော်မှုနဲ့ 969 လိုလှုပ်ရှားမှုမျိုးဖြစ်တယ်။ ကျနော်လေ့လာဖူးသလောက် က ဒီလောက်မြန်ဆန်တဲ့ ကြီးထွားမှုမျိုးဟာ ဒီချုပ်နဲ့ ဒို့ဗမာအစည်းရုံးလိုအဖွဲ့မျိုးတောင် မရှိခဲ့ဘူး။ ဒါဟာ ဘာလဲဆိုရင် နောက်ကွယ်က ပါဝါတစ်ခုရဲ့ တွန်းအားပါနေတယ်ဆိုတာကို သိသာစေတယ်။နောက်ပြီး 969 ကေ့စ်ထွက်ပြီး မိတ္တီလာကိစ္စဖြစ်ပြီး တစ်မြို့နယ်ပြီးတစ်မြို့နယ် ကူးစက်ပုံဟာ စံနစ်တကျ ကြံစည်ထားမှန်းသိသာလွန်းနေတယ်။ မြန်မာအစိုးရလို လုံခြုံရေးကို အထူးစိုးရိမ်တတ်တဲ့ အစိုးရနဲ့တပ်မျိုးဟာ ဒီလိုကေ့စ်မျိုးကို လွှတ်ထားပေးစရာ၇ှိကိုမရှိပါ။ အခု မထိန်းနိုင်တာဟာ တပ်က လက်ေ၇ှာင်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြတယ်။ ဒါကဘာကိုမြင်စေသလဲဆိုရင် ပါဝါဖစ်ဂါနှစ်ခုကြားလွန်ဆွဲပြီး တပ်ချုပ်လက်ေ၇ှာင်နေတယ်ဆိုတဲ့ သဘောကိုထင်ရှားစေတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီအခင်းအကျငးကို ဇာတ်ကွက်တစ်ခုလို ရှုမြင်လာရတယ်။
ချုပ်ပြောရရင် မွတ်ဆလင်-ဗုဒ္ဓဘာသာအုပ်စုတွေကြား တင်းမာမှုရှိနေတာကို မငြင်းဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ငြင်းဆိုတာက ဒီလို တင်းမာမှုကို ဖြေလျော့ချငရင် ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖက်က ရှိနေတဲ့သံသယကို ဖြေဖျောက်ချင်ရင် အမုန်းတရားနဲ့ လုပ်လို့မရဘူး။ နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့သွားရမယ်။ နည်းမှန်လမ်းမှန်ဆိုတာက သံသယဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့ အာဏာပိုင်တွေက ကိုင်တွယ်ခြင်းကို လုပ်နိုင်မှ ရမယ်။ အခုဟာက ဒီ Fault Lines တွေကို တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်အဆက်ဆက်က အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတည်းက တည်ထားပြီး နိုင်ငံရေးအတွက် ကစားခဲ့ကြတယ်။ ဒါကိုမြင်လို့ ရေးတာပါ။
နောက်ပြီ့း  Blame Game တစ်ခါလာလဲ ဗမာမှားတာ၊ တစ်ခါလာလဲ ဗမာ မှားတာ ဆိုတဲ့ တွန်းပို့မှုမျိုးကို မလုပ်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ်အထပ်ထပ် ကျနော်ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ စိတ်ပညာသဘောအရကို ဒီလို တွန်းဖယ်ရင် ပိုလုပ်ချင်တဲ့သဘာဝ က အထင်အရှားဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလို တစ်ဖက်သတ်ပြစ်တင်မှုမျိုးလုပ်ရင် 969 အင်အားပိုမိုတောင့်တင်းလာမှာသာဖြစ်တယ်လို့ ပြတ်ပြတ်သားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြပြီးဖြစ်တယ်။ အပေါ်မှာရေးထားတဲ့စတေးတပ်စ်ရဲ့ အနှစ်ချုပ်က ကုလားမုန်းတီးရေးကို အလွန်အကျူး လုပ်နေတာကို ဟန့်တားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Hate Speech ဆိုတာ ကောင်းကျိုးတွေကို မဖြစ်ထွန်းစေဘူးဆိုတာ သိသာနေပြီးသားမို့ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည် ထပ်ပြီး သိက္ခာမကျရအောင်ပြောနေတာပဲဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး တစ်ဖက်က တစ်ဖက် မုန်းတီးရေးကို လှုံ့ဆော်မှုဟာ မတည်ငြိမ်မှုကိုသာပိုမိုဖြစ်စေပြီး အက်ကြောင်းတွေကို ပိုမိုကြီးထွားစေတာမို့ ဒီလို အက်ကြောင်းကြီးစေတာမျိုးကိုတော့ ဆန့်ကျင်ပါတယ်။
ထိုနည်းတူပဲ အိုအိုင်စီလို ကိစ္စမျိုးကို လော်ဘီလုပ်နေတာတွေကိုလဲ ကန့်ကွက်ခဲ့သလို ကိုယ့်နိုင်ငံသိက္ခာကျစေမယ့် အသုံးအနှုန်းသုံးစွဲသူတွေကိုလဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။
ဘာသာရေးအက်ကြောင်းက နဂိုကတည်းက သီးခြားဆန်တဲ့မွတ်ဆလင်တွေရှိတဲ့ တိုင်းပြည်တိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ ဒီလို ပြဿနာကို မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်လိုရှင်းမလဲ လို့ဖြန့်တွေးကြည့်လို့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး ကုလား-ဗမာ အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်ခဲ့သော်ငြား မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ ကုလား-ဗမာ အဓိကရုဏ်းတွေက အိန္ဒိယမှာ၇ှိတဲ့ မွတ်-ဟင်ဒူ အဓိကရုဏ်းတွေလောက် မပြင်းထန်ခဲ့တာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာတွေအထိ ဖြန့်ကြည့်ပြီး အနာကို ကုဖို့ ကြိုးစားချင်ပါရဲ့
မွတ်ဆလင်တွေနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်လာရင် အရင်ဆုံးအမြင်ခံရတဲ့အမြင်က နိုင်ငံရေးဦးစားပေးလုပ်မလား၊ ဘာသာရေးဦးစားပေးလုပ်မလားဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဦးရာဇာတ်ဟာ လစ်ဘရယ်ကျတဲ့ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အမေက ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကာ ကိုယ်တိုင်က ကျောင်းဆရာဖြစ်တဲ့သူဖြစ်တာမို့ အတော်ကို လိုက်လျောညီထွေနေတတ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုရင် ကျန်လူတွေထက် ဘာသာရေးဘောင်တွေကို ထားခဲ့ဖို့လိုတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားဟာ တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားနဲ့ယှဉ်လာရင် ဘာသာရေးကိစ္စကို ဘေးခေါက်ထားနိုင်မှဖြစ်မယ်လို့မြင်ပါတယ်။ ကိုမြအေးရဲ့ စကားဖြစ်တဲ့ အမေကျော်ဒွေးတော်လွမ်းပြီး ဘင်္ဂါလီတွေဖက် ပင်းစရာမရှိဘူး ဆိုတဲ့ စကားမျိုးက ကောင်းပါတယ်။ ဝေနှင်းပွင့်သုန်ရဲ့ စကားတွေကတော့ တိုင်းပြည်နဲ့ ဘာသာရေးခွဲခြားနားမလည်ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ (တစ်ခါက သူ့ကိုဗမာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အဆိုင်းမန့်ဘယ်နှစ်စောင်လုပ်ဖူးလဲလို့တောင် မေးဖူးပါသေးတယ်။)ဒါကြောင့် ဒါတွေကိုလဲမွတ်ဆလင်တွေဖက်က ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်နဲ့အတူ Cosmopolitan ယဉ်ကျေးမှုကို ထွေးဖက်ထားနိုင်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
April 25, 2013 at 1:09 pm | Reply
၉၆၉ စတေကာခွာတော့ ထောင် ၂ နှစ်
I agree with you. But this is the PROOF of U Thein Sein-Min Aung Hlaing-Daw Suu alliance of Ultra-Nationalism…I am afraid these cases would pull all three of them to ICC for Command Responsibility and Omission of Duty.
Yahya Nyi Nyi Soe
လူတစ်စု ကိုးကွယ်ယုံကြည်သော ဘာသာသာသနာကို တမင် ညစ်နွမ်းအောင် ဆောင်ရွက်သော ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၉၅ တဲ. .. ..တံဆိပ်ကလေး ဖျက်တာထောင် ၂နှစ်ဆိုတော. လူတစ်စု ကိုးကွယ်…ယုံ ကြ ည် တဲ. ပ လီတွေ ကို ဖျက်တဲ. လူ တွေကော ထောင်ဘယ်နှနှစ် လဲ.